Let's talk about IT: SUID ဆိုတာ
Linux / Unix system တွေအကြောင်းလေ့လာရင် SUID / SGID ဆိုတယ့် အသုံးအနှုန်းမျိုး တွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ SUID ဆိုတာ Set User ID ကို အတိုခေါ်တာပါ။ Executable file တွေရဲ့ permission မှာ ပေးလေ့ရှိပါတယ် ။ SUID ပေးရတယ့် ရည်ရွယ်ချက်က executable permission ရှိတယ့် ဘယ် user ကပဲ execute လုပ်လုပ် ၊ ဒီ command / file ကို file owner ရဲ့ identity နဲ့ run လိုက်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ root user ရဲ့ file တစ်ခုကို everyone executable ပေးထားမယ်၊ ဒါပေမဲ့ SUID set ထားရင် ဘယ် user ကပဲ run run ဒီ file က root user အနေနဲ့ run ပါမယ်။ အနီးစပ်ဆုံး လို့ ထင်တယ့် windows ဥပမာကတော့ run as administrator နဲ့ run သလိုပေါ့။ ( သိပ်တော့မတူသလိုပါပဲ။ Run as administrator ကိုသေချာမသိလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး)
Linux / Unix မှာ file permission ကို rwx ( Read, Write, Execute) ဆိုပြီး သတ်မှတ်ပါတယ်။ SGID / SUID ပေးထားရင်တော့ s ဆိုတာလေးတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ဥပမာလေး ပြောရအောင် ။
User တိုင်းကို cd တို့ ls တို့လို command မျိုးကိုတော့ ပေးသုံးရပါတယ်။ အဲလို command တစ်ခုရဲ့ permission ကိုကြည့်ရင်
-rwxr-xr-x 1 root root 116688 2010-04-28 23:56 /bin/ls
File ရဲ့ owner က root ဖြစ်ပြီး other users ( Everyone ပေါ့ဗျာ Windows မှာတော့) ကို Executable permission ပေးထားတာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ Linux File permission ( rwx တို့ ၊ 700 တို့ 777 တို့ )အကြောင်းသိပြီးသား လို့ ယူစလို့ ဒါကိုမရှင်းတော့ပါဘူး။ ls command ကို User တိုင်းက အသုံးပြုနိုင်တယ်။ နောက်ထပ် User တိုင်း သုံး လို့ရတယ့် command လေးတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်။ Password change တယ့် passwd command ပါ။
-rwsr-xr-x 1 root root 25836 2009-09-14 20:14 /usr/bin/passwd
သူလည်း everyone executable ပေးထားတယ် ဒါပေမယ့် တတိယအလုံးမှာ x မဟုတ်ပဲ s ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ SUID set ထားတယ်လို့ ဖော်ပြတာပါ။ ls command တုန်းကလိုပဲ သူ့မှာလည်း နောက်ဆုံးအလုံးက 'x' ၊ ဒါဆို others မှာ executable permission ပေးထားတာပေါ့။ ကွာတာက ၊ ရှေ့မှာ 's' ဖြစ်နေတယ်။ ls command တုန်းကလိုပဲ User တိုင်းကသုံးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ passwd command ကို သုံးပြီး လုပ်သမျှအလုပ်တိုင်းကိုတော့ root အနေနဲ့ လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ SUID ကို security consideration တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ Command တိုင်း file တိုင်းကို အားတိုင်း SUID set မလုပ်ဖို့ အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ?
ခုနက passwd command လေးကိုပဲ ကြည့်ရအောင်။ User တစ်ယောက်ရဲ့ password ဟာ /etc/shadow ဆိုတယ့် file ထဲမှာ hash အနေနဲ့ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ဒီ hash တွေကို ရရင် rainbow table တွေဘာတွေနဲ့ decipher လုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Root user ရဲ့ password လည်း hash အနေနဲ့ ရှိပါတယ်။ အဲတော့ ဒီ /etc/shadow file ထဲက data က အရမ်းအရေးကြီးတယ့် sensitive data ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဘယ် user ကိုမှ ပေးမကြည့်သင့်ဖူးပေါ့။ ဒီ /etc/shadow file ရဲ့ owner က default အနေနဲ့ root ဖြစ်ပြီး permission က 700 ( Owner သာလျှင် rwx ရှိပြီး ကျန်တယ့်လူတွေ read တောင်လုပ်လို့မရတယ့် permission) ပေးထားလေ့ရှိပါတယ်။
အဲမှာ စတာပါပဲ ၊ User တစ်ယောက်က password change ရင် passwd command ရဲ့ process တစ်ခုအနေနဲ့ password အသစ်ကို hash ပြောင်းပြီး ဒီ /etc/shadow file ထဲမှာရှိတယ့် သူ့ရဲ့ password hash ကို ပြင်ရပါမယ်။ ဒါမှ password အသစ်ဖြစ်မှာကိုး။ ဒါပေမယ့် root user ကပဲ ဒီ file ကို edit လို့ရတယ်။ ဒါဆို password change တိုင်း root ကိုလှမ်း change ခိုင်းရမှာလား ။ ဒါဆိုလည်း မဟုတ်သေးဘူး။ ဒါတွေကြောင့် password change ရာမှာသုံးတယ့် passwd command ကို root အနေနဲ့ SUID set ထားလိုက်ပါတယ်။ passwd command က လုပ်တယ့် အလုပ်မှန်သမျှ ၊ /etc/shadow မှာ hash update လုပ်တာအပါအဝင်၊ အားလုံးကို ဒီ file ရဲ့ owner ဖြစ်တယ့် root user အနေနဲ့ လုပ်သွားလိုက်တယ်။ /etc/shadow ကို everyone editable ပေးရတာထက် အများကြီးကောင်းတာပေါ့။ ဒီလောက်ဆိုရင် SUID ဆိုတာ ဘာလုပ်တယ်၊ ဘယ်လိုဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ SUID set ရင် အလွန်သတိထားရပါတယ်။ ဒီ executable file က ဘာတွေလုပ်သလည်းဆိုတာရယ် သူ့ source ရယ်ကို သိသင့်ပါတယ်။ SGID set ထားတယ့် file တစ်ခုက တစ်ခြား user ကို write permission မပေးရပါဘူး။ Edit လုပ်ပြီး သူလိုချင်တယ့် command တွေပြောင်းသွားရင် ကိုယ်ပဲ ပြသနာဖြစ်ပါမယ်။ Shell script လိုဟာမျိုး ၊ source file လိုဟာမျိုးကို SUID မပေးသင့်ပါဘူး။ Content ကိုမြင်နေရလို့ Buffer Over Flow(BOF) flaw ရှိတာတို့ဘာတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် Compiled binary ကိုပဲ SUID ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါတောင် safe လို့ပြောလို့မရပါဘူး။
ခုတစ်လော စာမရေးဖြစ်တာကြာလို့ Clonezilla လေးနဲ့ server တစ်ခုကို image အဖြစ်ပြောင်းနေတာ ထိုင်စောင့်ရင်း ဒီ post ကိုရေးလိုက်ပါတယ်။ SGID တော့ နောက်မှပေါ့ ။ ဘာရေးရမှန်းမသိသလို စာစီမရတာလည်းကြာပြီ ။ :D
Posted by Divinity at 1:29 AM
Labels: Divinity, Linux, Security In Mind
အခု ညီလေးမရေးဘူးဆိုပြီး Spring Framework ရေးပြီးတင်လိုက်တော့မှ SUID ဆိုပြီးတက်လာတယ် ..။
လခတိုးသူများ လိုက်ကျွေးကြပါ ...လိုက်ကျွေးကြပါ။
I owed you one more cup of coffee :) Sigh!!!
ကျနော်လည်း post ရေးတုန်းကမရှိဘူး၊ တင်တော့မှ အောက်က post ရောက်နေတာတွေ့တာ ဟီးဟီး
Inseption သွားကြည့်မယ် ၊ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ ရဲ့ နောက်ဆုံးကားပဲ :D စီစဉ်လိုက်လေ coffee လေးဘာလေး သောက်ရင်းနဲ့ပေါ့ ဟဲဟဲ